XOG: Xukuumadda Puntland oo toos uga qeyb ah loolanka doorashada Gudoomiyaha baarlamaanka, Yeyse isku raaceen?
November 12, 2019 NEWS 1
GAROOWE(P-TIMES) – Xukuumadda Puntland ayaa si toos ah uga qeyb ah loolanka loogu jiro cida qabanaysa xilka gudoomiyaha baarlamaanka Puntland, waxaana ay garab siinaysaa mid kamid ah Musharaxiinta u taagan xilkaas, oo ah Agaasime waaxeed horey uga soo shaqeeyey Madaxtooyada.
Madaxweynaha Puntland iyo saaxiibadiisa siyaasadeed ayaa si toos ah xariiro ula sameynayay Xildhibaanada qaarkood, waxayna bilaabeen adeegsiga in si toos ah loogu sheego in ay soo doortaan Musharaxa ay Xukuumaddu wadato.
Talaabadan, waa mid kasoo horjeeda kala madax banaanida Hay’addaha maamulka, sidaas oo kale waxay muujinaysaa in damaca Xukuumaddu uu sii kordhayo.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni wuxuu saacadihii hore dadaal ku bixinayay in musharaxii soo baxaba lala shaqeeyo, gaar ahaana labada musharax ee aadka loo saadaalinayo, balse kulan dhacay duhurnimadii maanta ayay isku raaceen musharax.
Siyaasiin iyo xubno kusugan Garoowe ayaa la hadlay PUNTLANDTIMES waxayna sheegeen in loolanka ay ku jirto Xukuumaddu uu muuqdo, ayna wasiiro uu hogaamiyo Wasiirka Maaliyadu dadaal kasta bixinayaan.
Xildhibaanada qaarkood oo la hadlay Puntlandtimes waxay sheegeen in ay ka walaacsan yihiin faragalinta sii kordhaysa ee golaha Xukuumadda uga imaanaysa golaha wakiiladda, waxayna cadeeyeen in ay muuqato arrin aan wanaagsaneyn.
Xildhibaan Cabdirashiid Jibriil oo horey u soo noqday Agaasimaha waaxda Warfaafinta, Hidaha & Dhaqanka ee madaxtooyada Puntland ayaa ku jira loolankii ugu adkaa, wuxuuna 11 bilood oo qura ka mid yahay baarlamaanka, isagoo la tartamaya Cali Axmed Dhahar oo mudo ka badan 10 sanno soo maamulayay howlaha baarlamaanka, bartayna sharciga iyo Qeynuunka.
Abwaan ayay kooxda Madaxweynaha Puntland ay wadaan, taas oo ay doonayaan in ay ka dhigaan Afhayeenka baarlamaanka.
Madaxweynaha Puntland, aragtidiisii Siyaasadeed ee uu kusoo galay doorashada Puntland, gaar ahaana barnaamijkiisa qoran ee ARAGTIDA DENI, waxaa ku cad in balanqaadkiisa koowaadna ay ahayd in ay kala madax banaanadan Hay’addaha dawladda, gaar ahaana fulinta, Sharci dajinta & Garsoorka.
For your information there is no Government in Puntland because of the attack and killing people that were at the parliament and sacking the speaker of the parliament without due process and giving bribe to the parliament members.